एक व्यक्ति तपाईंलाई मन पर्छ भने कसरी थाहा छ स्टाइलिश पुरुषहरू
एक मानिस तपाईंलाई मनपराउँछ भने कसरी भनेर
त्यहाँ धेरै स signs्केत वा संकेतहरू छन् जसले सेवा गर्दछ एक संकेत को रूप मा जान्न को लागी एक मानिस तपाईंलाई मन पर्छ। यद्यपि सबै अन्तर्ज्ञानको साथ पनि होईन जुन हामीलाई प्रोम्प्ट गर्दछ हामी कसरी प्रभावकारी ढंगले झलक देख्न सक्छौं हामी गलतमा जान सक्दैनौं।
त्यहाँ कोही मानिसहरु छन् जो आफ्नो भावनाहरु लाई कसरी अभिव्यक्त गर्न जान्दैनन् तिनीहरू पक्का छैनन् कि तिनीहरू सहि दिशातर्फ जाँदैछन् कि भनेर, त्यसोभए श doubts्का उत्पन्न हुने बित्तिकै सम्बन्ध सुरु हुन्छ वा त्यहाँ मैत्री मात्र हुन्छ। कारण जेसुकै होस् वा किनभने हुन सक्छ केही जिज्ञासा महसुस, यहाँ केहि सुझावहरू छन्।
1 एक पुरुष तपाईंलाई मन पर्छ भने कसरी थाहा छ?
1.1 उनको शरीर को स्थिति उसलाई दूर दिन्छ
1.2 आँखा सम्पर्क द्वारा
1.3 जब त्यहाँ शारीरिक सम्पर्क हुन्छ
2 अन्य विवरणहरु लाई पनि महत्व छ
एक पुरुष तपाईंलाई मन पर्छ भने कसरी थाहा छ?
शंका वा अनिश्चितता दुबै महिला र अन्य पुरुषहरूमा आकर्षित पुरुष दुबैको लागि समान रूपमा उपस्थित छन्। लक्षणहरूको बावजुद र धेरै केसहरूमा धेरै स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ सँधै ती साना टक्करहरू वा समस्याहरू हुन्छन् उहाँ तपाईंलाई रुचि छ वा छैन पहिचान गर्न।
उनको शरीर को स्थिति उसलाई दूर दिन्छ
यसलाई हामी शरीरको भाषा भन्छौं र यो यो हो कि यदि ऊ जान्छ कि ऊ कसरी इशारा गर्छ, ऊ कसरी गति गर्छ वा उसको शरीरले कस्तो स्थिति अपनाउँदछ, हामी प्रायः उसको मनसाय के हो झल्काउन सक्छौं। पुरुष र महिलाहरूको अध्ययनमा, यो देखाईयो कि महिलाहरू जब हामी अन्य व्यक्तिमा रुचि राख्छौं हामीले 52२ इशाराहरू, र मानिस केवल १० आन्दोलनहरू सिर्जना गर्नुभयो.
कहिले मानिसको शरीर कसैको लागि धेरै झुकाव त्यो तपाइँको रूचि, यो एक संकेत हो। अरु के छ ततिनीहरूको खुट्टाको स्थिति हेर्नुहोस्, तपाइँको काँध र हिपको कि यदि ती व्यक्ति तिर औंल्याउँछ भने यो हो हो।
अधिक संकेतहरू जब मानिस हुन्छन् सामान्यतया खुट्टा फैलाएर र हिप्समा हात फैलाउँदछ। होइन कहिले टाढा फर्कने छैन त्यो व्यक्ति र तिनीहरूलाई पनि धेरै हेर्ने छ। ऊ नजिक भएर पनि आउनेछ उसले खास गरी के भनिएको छ त्यसको ख्याल राख्छ। समेत नोटिस जब तपाइँ निरन्तर समायोजित गर्न चाहानुहुन्छ y समय-समयमा उनको कपाल छुनुहोस्, ती पनि संकेत हो।
आँखा सम्पर्क द्वारा
पक्कै पनि एक चासो मानिस ऊ सँधै धेरै हेर्नेछ। तर उसलाई लाज मान्ने व्यक्तिको साथ भ्रममा नपार्नुहोस् किनभने धेरै जसो परिस्थितिमा ऊ देख्न सक्दैन किनकि ऊ लाज लागीरहेको छ भने ऊ लज्जित छ। तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाइँको रुचि स्तर यो अवलोकन बनाउने- केहि सेकेन्डको लागि उसलाई आँखामा हेर्नुहोस् र उसले कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ हेर्नुहोस्। जब ऊ हेर्छ, केवल एक सेकेन्डको लागि तपाईंको टकटकी हटाई उहाँलाई फेरि आँखामा हेर्नुहोस्।
यदि तपाइँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यो किनभने रुची ठूलो छ। यदि उसले तपाइँको ओठमा पनि हेर्छ भने, यो जोश महसुस गर्ने पर्यायवाची हो। तर यदि तपाईं द्रुत रूपमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ ठूलो चासो पनि हुनेछ। र यदि उसले उसलाई धकेल्छ र तपाईंलाई फेरि हेर्छ भने त्यहाँ पनि इच्छा छ। यदि आँखा सम्पर्क छैन भने र केटा प्राकृतिक वरिपरिको हेर्छ भने, हामी चासोको केहि कुरा छैन।
जब त्यहाँ शारीरिक सम्पर्क हुन्छ
यो पोइन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ र धेरै पक्षहरू यहाँबाट आउँदछन्। यदि तपाईं सँगै हुनुहुन्न र अचानक तपाईं नजिक आउनुहुन्छ भने, जहिले पनि शारीरिक सम्पर्क कायम राख्न एक तरिका भेट्टाउने छ, या त हातमा एक सानो दुलई संग, उसले तपाईंको कम्मर छुन्छ वा आफ्नो हात आफ्नो हातमा ल्याउँछ। त्यहाँ अन्य थोरै विवरणहरू छन् उसको हात उसको माथि राख्नुहोस् हँसीको क्षण को बहाना संग वा कहिले तिम्रो अभिवादन र बिदाइहरु धेरै मायालु छन्, ठूला अँध्यारो संग।
यदि यो पाठ्यक्रम को एक लजालु केटा हो ऊ यी कुनै पनि इशारा गर्न हिम्मत गर्दैन। यस अवस्थामा तपाईले एक जना कदम चाल्न सक्नुहुन्छ कि उसले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन। यदि ऊ चकित छ र भाग लिन चाहँदैन भने घबराउँदैन भने, यो उसको लाजको कारण हुनेछ। यद्यपि पछि र उपर्युक्त विवरणहरू हेर्नुहोस्।
अन्य विवरणहरु लाई पनि महत्व छ
हामीले समीक्षा गरे अनुसार तपाईंको सबै ध्यान तपाईंको मनपर्ने व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ। तपाईं बेवास्ता गर्न सक्षम हुनुहुने छैन तपाईंको अनुहारबाट स्थायी मुस्कान हटाउनुहोस्, यदि आँखा छिटो भेट भए पनि ऊ हाँस्नेछ।
नियम अनुसार सहयोग गर्न सक्दैन तर त्यस व्यक्तिको ओठमा हेर्नुहोस्, तपाईं आँखामा तर मुखमा हेर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यो एक धेरै स्पष्ट संकेत हो, जबकि त्यहाँ मान्छे तिनीहरू आँखामा हेराई गर्न सक्षम छैनन् र आफ्नो अनुहारको अ points्कलाई अन्य हेराईहरूतिर मोड्नुहोस्।
सधैं कुराकानीको बखत तपाईलाई कस्तो लाग्छ जान्न उत्सुक हुनेछ, तपाईं कसरी हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर देखि, यो तपाईंको सेवामा तपाईंलाई मद्दत गर्ने तरिका फेला पार्नको लागि हुनेछ। यस बाहेक यसले तपाईलाई धेरै बधाई र भर्ने गर्दछ तपाईसँग धेरै पोइन्टहरू साझा गर्न खोज्दछ। यो अंश धेरै सन्तोषजनक छ किनकि यदि तपाईं वास्तवमै समान विचारको हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ।
यदि तपाईंसँग अझै यी सबै विवरणहरू र त्यो व्यक्ति तपाईंलाई मनपर्‍यो संग स्पष्ट छैन भने, तपाईं जहिले पनि चरण आफै जानको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यसलाई जोखिममा राख्नुहुन्न भने, इनाम अवस्थित हुन सक्दछ, र यो त्यस्तो नगरेकोमा पश्चाताप गर्नु भन्दा यसको लागि लायक भएको हो वा नभएकोमा पश्चाताप गर्नु राम्रो हुन्छ। फ्लर्ट कसरी गर्ने बारे थप पढ्नको लागि तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ "कसरी अनलाइन फ्लर्ट गर्न"वा"केटीमा कसरी प्रवेश गर्ने सिक्ने उत्तम सुझावहरू"।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » एक मानिस तपाईंलाई मनपराउँछ भने कसरी भनेर
तपाईको पार्टनरलाई चिन्ने र घनिष्ठ सम्बन्ध सुधार गर्न सुझावहरू